Soo-saareyaasha Qalabka & Alaab-saareyaasha - Qalabka Shiinaha & Shirkadaha Soo Saarayaasha & Warshadaha
Habka qaladka Terrarium
Sheyga Magaca Terrarium Fray Nidaamka Khaldanka Nidaamka Shaandheynta Midabka 18.5 * 13 * 9cm Qalabka Madowga YL-05 Feature Si sahlan loo rakibo oo loo isticmaalo, nozzles buufiyeyaal aad u sahlan, waxay ku hagaajin karaan jihada 360 digrii Fiican iyo xitaa ceeryaamo No buuq iyo aamusnaan, maya Rabshadaha rarka alaabada yar yar, waxqabadka qumman, nolosha dheer ee adeega Bamka wuxuu leeyahay cadaadis dibada ah iyo qulqulka qulqulka yar Hordhac Nidaamka khaladka waxaa kamid ah 1 bambo, 2 isku xir bamka, 1 p ...
Baqashada cayayaanka oo la laabi karo
Magaca Badeecada Xaydaanka Cayaaryahan Gaarka ah S-30 * 30 * 30cm M-40 * 40 * 60cm L-60 * 60 * 90cm Qalabka Muuqaalka Madow ee NFF-57 Feature Waxaa lagu heli karaa saddex cabbir. Waa la laalaabi karaa, culeys fudud, si fudud loo qaadi karaa loona kaydin karaa. Naqshadeynta Zipper, wey fududahay in la furo oo la xiro. Mesh miskaha neefsashada leh ee hawo-mareenka wanaagsan si ammaan-ilaaliyeyaasha looga dhigo kuwo aamin ah. Meesha daaqadda ka nadiifi si aad u aragto si sahlan. Xadhig la qaadan karo oo dusha sare ah, kuna habboon dhaqdhaqaaqa. Horudhac Qaansada xayawaanku waxay ku habboon tahay balanbaalisista, aboorka, dusha sare, wasakh ...
Jiinka Roobka Roobka
Magaca Badeecada Taangiyada Xarkaha Roobka Tilmaanta midab 5 * 7 * 2.6cm Qalabka Birta Madoow Yel-06 Muuqaalka Birta, waarta. Sahayda haanta roobaadka, waxaa loo adeegsan jiray in lagu rito haamaha haanta dhexdeeda. Hordhac Kuraasta haanta roobaadka waxaa loogu talagalay in lagu rakibo haamaha kuwa ku shaqeeya haanta roobaadka si loo abuuro deegaan ku habboon raaxo leh xamaasha.
3-in-1 Reptile Terrarium Substrate Mat
Magaca Badeecada 3-in-1 Reptile Terrarium Substrate Mat Specification midabaynta NC-10 26.5 * 40cm NC-11 40 * 40cm NC-12 50 * 30cm NC-13 60 * 40cm NC-14 80 * 40cm NC-15 100 * 40cm NC -16 120 * 60cm Grey Materi Polilester / balaastig / PVC Model NC-10 ~ NC-16 Muuqaal Dusha sare ee balaastikada ahi waxay ka hortagi kartaa kaadida xayawaanka iyo qoyaanku inay joogaan dusha si ay u abuuraan jawi qalalan xayawaanka. Dhex-dhexaadka lakabka dhexe waa mid aad u nuugsan, kaasoo kordhin kara huurka illaa sanduuqa quudinta. Qalabka caaga ah ee PVC ...
Sumcadda Magaca Sheyga Reptile Rug cayiman midabka 26.5 * 40cm 40 * 40cm 50 * 30cm 60 * 40cm 80 * 40cm 100 * 40cm 120 * 60cm Qalabka cagaarka ah ee nooca Polyester Model NC-20 Feature Waxaa laga heli karaa 7 cabir, ku habboon sanduuqyada celcelis ahaan cabbirro kala duwan. maaddooyin aan sun ahayn iyo dhadhamin, waara, la dhaqi karo oo dib loo isticmaali karo. Biyo qabatin wanaagsan, kordhi huurka illaa sanduuqa quudinta. Kaadida ka bax, deegaanka nadiifi. Hordhac rooga dabacsan wuxuu siin karaa meel aamin ah oo nadiif ah xamaasha, ...
Magaca sheyga Liiska leashka Gaadhiga dhererka xargaha midabka dhererkiisu yahay 1.5m baalal qalooc 18 * 4.5cm cabirkiisa xabadka xabadka S-9 * 3.3cm / M-12.1 * 4.8cm / L-13.2 * 6.2cm Qalabka maqaarka Madow NFF-56 Feature leh clip lagu hagaajin karo Xadhigga leashka, wuxuu ku hagaajin karaa iyadoo loo eegayo sida xamuulkaaga. Waxyaabaha maqaarka ah ee maqaarka ah, maqaarka u roon, waxyeello u geysanin waxyaalahaaga xayawaanku leeyahay. Naqshadeynta baalalka baalalka qabow, cute iyo moodada. Iyada oo leh 3 xabbadood oo xabadka feedhka ah, ku habboon hilibka xoolaha cabbirkoodu kala duwan yahay. Hordhac Go'an waxaa ka mid ah leas ...
Sariir jilicsan oo jilicsan
Magaca sheyga Reptile jilicsan Tilmaanta Gaarka S: 26 * 24 * 26cm M: 26 * 26 * 38cm L: 32 * 32 * 45cm Ciidanka Qalabka cagaaran ee PVC Model NFF-52 Feature Waxaa lagu heli karaa 3 cabbir, oo ku habboon cabbirro kaladuwan oo cabbirro kala duwan leh. Ku dheji geesaha ama sagxadaha siman. Meelaha 'PVC', oo nadiif ah oo raaxo leh. Way fududahay in la isticmaalo, kaliya hagaaji koobka nuugista oo nuug. Hordhac Xarigga xarigga dabeysha wuxuu ku habboon yahay ceratophrys, lizzz, spiders, scorpions iyo waxyaalaha kale ee xamaaratada ah. Waxay abuuri kartaa meel nasasho arboreal ah oo t ...
Caddaynta Cudur-Seeraha Cudurka Mashiinka
Magaca sheyga Ceramic-Ceeldheer Caddaynta Saxeexa Mindhicirka Midabaynta 8 * 4 * 1.5cm Foornada Ceramalka Moodalka Neefka NFF-49 Muuqaalka Ceramic, ma-sumaysan. Naqshad fudud, fududahay in la nadiifiyo. Iyada oo leh qaab looga hortago si looga hortago in cuntada nool ay ka baxsato. Hordhac Koobkan ayaa laga sameeyay dhoobada, waarta oo aan sun ahayn, oo si fudud loo nadiifin karo. Waxay ka hortegi kartaa cuntada nool inay ka baxsadaan meedka ka-baxsiga si ay quudinta uga dhigaan mid wax ku ool ah.
Qalabka Saameynta Sunta Saami ah ee Sunta Saami ah
Magaca Alaabada Alaabta Sifeeya Saxarada Suuqa Saaraynta Biyaha Saami Muuqaal midab 8 * 4 * 1.5cm Qaabka Cad Ceramic Model NFF-48 Muuqaalka Sheyga, oo aan sun ahayn. Naqshad fudud, fududahay in la nadiifiyo. Hordhac Koobkan ayaa laga sameeyay dhoobada, waarta oo aan sun ahayn, oo si fudud loo nadiifin karo. Waxaa loo isticmaali karaa sidii maddiibadda biyaha iyo mooska cuntada.
Qalabka Rakhiyaha Alaabada ee Alaabada Xamuulka
Magaca Sheyga Soocelinta Alaabada Sifeynta Shafka Caano Sheegashada ah 27cm Qalabka qalinka birta ah ee nalka ka sameysan NFF-45 Muuqaal tayo sare leh oo bir aad u wanaagsan, waarta. Iyada oo leh godad cufan, oo hufan si loo nadiifiyo. Fudud oo raaxo leh in la isticmaalo. Hordhac Sanduuqan ciidda ah waxaa laga sameeyay bir aad u tayo sarreeya, ma fududa in miridhku yeesho oo waara. Waxaa loo habeeyay nadiifinta kaabayaasha alaabada. Way kuu habbooneysaa inaad ku nadiifiso sanduuqa alaabta wax lagu tuuro ee majarafaddan, inaad u kariso ...
Caarada iyo Cayayaanka Fiska
Magaca sheyga Caarada iyo Noocyada Qeexista Xaasha ee Nooca 64cm Waxyaabaha Cagaaran ee PP / ABS Moodel NFF-44 Feature Qaab fudud oo qurux badan. Naqshad gacmeedka Ergonomic, fudud oo raaxo leh in la isticmaalo. Qabso caarada si dhaqso leh oo wax ku ool ah. Hordhac Furte furkaani wuxuu ka samaysan yahay balaasti pp ah, waara. Waxay ku habboon tahay in looga saaro cayayaanka qaab-saaxiibtinimo leh.
Nooca Tilmaanta Lamabarka Tilmaanta Midabka Midabka Cad ee dhoobada cad ee moodada ah nooca loo yaqaan 'NFF-43 Feature Fit' oo leh nambarka korantada E27. Saldhigga nalka dhoobada. Markay shiddo / dejiso Hordhac Saldhigga laambada waxaa loo adeegsan karaa cabbir weyn oo cabbir badan oo kala-firidhsan ama si xoog ah loo adeegsaday. Waxaad isticmaali kartaa nalalka kuleylka, nalalka UVb ee loogu talagalay aquarium, xamaarayaasha, qulqulaya.